Atidohan’ny asan-dahalo – Tampoketsa : manamboninahitra zandary telo ahiahian’ny fokolonona | NewsMada
Atidohan’ny asan-dahalo – Tampoketsa : manamboninahitra zandary telo ahiahian’ny fokolonona
Par Taratra sur 22/12/2016
Manamboninahitra zandary telo sy miaramila iray no ahiahian’ny fokonolona ho atidohan’ny asan-dahalo sy halatra omby arahina doro-tanety, any amin’ireo distrika efatra (Andilamena, Mampikony, Tsaratanana ary Mandritsara), manamorona an’i Tampoketsa. Fanadihadiana…
Andilamena, Mampikony, Tsaratanana ary Mandritsara, ireo no mandrafitra an’i Tampoketsa, izay faratra mafana amin’ny asan-dahalo amin’izao fotoana izao. Misy fitoriana ataon’ny niharam-boina momba ny asan-dahalo any an-toerana, kanefa ireto farany indray no atolotry zandarin’Andilamena ny fitsarana.
Manamboninahitra zandary telo ary miaramila iray no ampangain’ny fokonolona fa ambadiky ny fanamorana ny asa ratsin’ ireo dahalo. Tsy izay ihany fa ahina ny hisian’ny fifandomana eo amin’ny samy zandary, ary ny zandary sy ny tafika 316 ao Ambalagoaika.
Miaiky kosa ny lehiben’ny boriborintany Miarinarivo fa hangalaran’ omby sy handalovan’ny omby halatra ny boriborintany sahaniny fa tsy mitahiry ny omby halatra.
Raha ny fanazavana, fitoriana sy fitarainana napetraka fianakaviana maromaro monina ao Mihizohizo, fokontany Manompy Atsimo, kaominina ambanivohitr’i Miarinarivo
disitrikan’ Andilamena, faritra Alaotra Mangoro.
Nanadihady ny mpanao gazety
Teny anivon’ny zandarimariam-pirenena hatrany amin’ny etamazoro, ny 5 novambra lasa teo no nahafahana nanao ny fanadihadiana sy nidinana teny ifotony. Very omby 700 sy nodorana trano ary nisy maty voatifitra roa ireto fianakaviana ireto, ny 28 septambra lasa teo. Nametraka fitoriana ireo dahalo izay fantatra amin’ny tarika Dany be sy ny tariny, teo anivon’ny kompanian’ny zandarimariam-pirenena Andilamena ny fokonolona. Tsy noraisin’ny teo anivon’ny kaompania ny fitorian’ ireto farany. Raha naka taksibory tany Andilamena nikasa ny hitondra ny fitoriany ireo olona dia nosamborina ary nohidina “violon” ary natolotra ny fampanoavana tany Ambatondrazaka, saingy nohafahan’ny fitsarana.
Nandeha ny feo taorian’izay fa arovan’ ilay kapiteny lefitra voalohany eo anivon’ny kompanian’ Andilamena ny dahalo. Vokany, nametraka fitoriana ny lefitra voalohany eo anivon’ny kompanian’ny zandarimariam-pirenena Andilamena ihany koa ny fokonolona ao Miarinarivo. Ity zandary ity izay nambaran’ny olona fa manao kolikoly, noho izy io, efa ampolony taona maro tsy nifindran-toerana ary manana omby efa anarivony. Mifamahofaho eo ny raharaha momba ny dahalo sy ny firaisana tsikombakomba aminy any an-toerana.
Lég: Nidina ifotony ny mpanao gazety tany Andilamena
Ahina ny fifandonana eo amin’ny samy zandary sy tafika
Nandritra ny fanadihadiana teny ifotony hatrany no nahalalana fa misy kizon’ireo dahalo sy faritra fanadiovana omby halatra eo amin’ny fisarahan’ny tendrombohitr’ i Tampoketsa, izay mampisaraka ny faritanin’ i Toamasina sy Mahajanga ka eo anelanelan’ny disitrika efatra: Andilamena, Mampikony, Mandritsara ary Tsaratanana.
Nambaran’ny manamboninahitra zandary iray fa raha tafiditra ao ny omby halatra, madio avy hatrany, satria ahitana karazana fanaovana antontan-taratasin’omby sy fitomboka fanjakana maro isan-karazany io faritra mena io. Voalaza koa fa feno fitaovam-piadiana mahery vaika
ka sarotra ny fanarahan-dia omby very. Ny tena olana, hoy ity manamboninahitra iray ity, manamboninahitra zandary avy amin’ny kaompania efatra mifanolo-bodirindrina ireo ihany no tena atidoha sy miaro ireo dahalo. “Manana mpiaro ambony ihany koa ireo
manamboninahitra voalaza tetsy ambony ireo”, hoy hatrany ny fanazavana. Nohamafisin’ ity farany fa raha misy baiko tampoka handravana io kizo io, fifampitifirana eo amin’ny samy mpitandro ny filaminana no hiseho.
Raha namantana trano foana kosa ny ekipan’ny zandary sy fokonolona nikasa
hisambotra dahalo, ny 13 desambra teo, fantatra fa efa nosamborin’ny tafika ao amin’ny kompania 316/1Rm3 kaominina ambanivohitra Antanimenambaka ilay dahalo saika hosamborina ary mbola hazomin’ ireto hatramin’ny fotoana nanoratanay ny lahatsoratra. Vokany, tsy faly noho izany ny zandary, izay fihetsika ahina hiteraka fifandonana
eo amin’ny roa tonta.
Tsy manana zo hisambotra sy hanao famotorana olona ny tafika, tsy andraikiny izany fa fomba hiarovan’ izy ireo ilay dahalo mba hanafahany maka vola be izao, raha ny fanazavana ihany. Tsy izay ihany ny zava-miseho mampahonena ao amin’ny disitrikan’ Andilamena amin’ izao fa nosamborin’ny tafika ihany koa ny iray amin’ ireo mpitory ny dahalo ary samy nidina tao amin’ny tobin’ny 316. Raha ny loharanombaovao voaangona avy tao anatin’ny toby ihany, miaina amin’ny daroka lavereny ny mpitory sy dahalo mba hamoaka vola ho takalon’ny famotsorana. Tsy afa-manao na inona na inona kosa ny zandary mba tsy hisian’ny fifandomana .
Miaiky ny lehiben’ny boriborintany
Miaiky kosa ny lehiben’ny boriboritany Miarinarivo, Randrianasolo Arimanana Charles, fa faritra mena sy betsaka halatr’omby eo amin’ny faritra iadidiany ary isehoana tranga roa farafahakeliny isaky ny alina. Lasa toeram-pangalaran’ omby sy lalana lalovan’ny
omby halatra ny kaominina Miarinarivo fa tsy mitahiry omby halatra . “Ary misy mihitsy aza zandary kapiteny avy amin’ny distrika hafa mpifanolo-bodirindrina sahy maka an-keriny fotsiny izao ombin’ olona aty Miarinarivo. Tsv vitan’ izany fa mitondra taratasy “ordonnance” hosoka haka ombin’ olona; taratasy izay tsy sahiny aseho akory any amin’ny lehiben’ny disitrikan’ Andilamena”, hoy ny fanazavana. Nohamafisin’ ity solontenam-panjakana any an-toerana ity fa anisan’ny antony mampirongatra ny asan-dahalo ihany koa ny tsy famindran-toerana ireo zandary ka lasa efa mifankahalala tsara amin’ny dahalo. Manginy fotsiny ny tsy fahampian’ny fitaovam-pitaterana, ny solika hampandehanana moto, tsy fahampian’ny zandary misahana ny kaominina Miarinarivo rahateo, izay tsy misy afa tsy 18. Raha tsorina, 100.000 Ar ny hofana moto ray avy eo Andilamena raha ho any Miarinarivo.
Fanadihadiana: Sajo/ Yves S.